INkomfa yeNdawo yaseTshayina yowama-2019-egcinwe ngempumelelo nge-China-Day-Day-Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Ingqungquthela ye-China ye-Space 2019-egcinwe ngempumelelo nge-China-Day-Day
Ingqungquthela ye-China ye-Space 2019-egcinwe ngempumelelo nge-China-Day-Day
Njengowona msitho unegunya kunye nodumo oluphezulu kwicandelo lezinto ezibhabhela eTshayina, iNkomfa yaseSpain yaseChina yabanjwa ngempumelelo ngo-Epreli 2019-23 ​​e-Changsha, China, njengenxalenye yeminyhadala yangaphakathi eChina. . Isebenza njengefestile yoluntu lwaseTshayina kunye nehlabathi ukuba liqonde ngcono inkqubela phambili ye-China.
INgqungquthela ye-2019 ye-China Space ihambelana njani nemicimbi yeSithuba seSithuba?
Ukususela kwi-2016, i-China iye yasungula i-Aprili 24 njengeSuku loMhlaba.
Khokelwa ngu Ulawulo lweeNzululwazi lwezoNzululwazi, ubuChwepheshe kunye neShishini loKhuselo lukaZwelonke, ulawulo lweSizwe loLawulo lweZithuba (I-CNSA) kunye noMbutho wamaShayina weSayensi neThekhnoloji, ehlelwe yiChina Astronomy Society kunye neChina Space Foundation, iNkomfa iyinxalenye yeziganeko ekhaya leSithuba seShayina eChina, ezinye iziganeko ezifana neSikhumbuzo sokuvula Usuku Lwezithuba e-China, iZizwe eziManyeneyo / iChina kwiZingxaki zeZithuba - Ukufezekiswa kweenjongo zokuPhucula okuPhezulu, i-Hunan Space Industry Development Symposium kunye nezinye iziganeko ze-20.
Abameli abangaphezu kwe-1600 bathatha inxaxheba kwiimicimbi zengingqi, kubandakanywa izifundo, oomasipala karhulumente kunye namaziko, abameli bamaqela abucala, iindwendwe zangaphandle ezivela kwimibutho yamazwe ngamazwe e-10 kunye ne-arhente yendawo ye-50.
UZhang Kejian, umqondisi we-CNSA, uhambisa intetho kwinkqubo yokuvula
Ziziphi iingqungquthela zeNgqungquthela ye-2019 China Space?
Ngesihloko ekufuneni Iphupha lesithuba sokusebenzisana ngokuphumeleleyo-Phishekela Iphupha Lendawo Ukuze Uphumelele UkubambisanaLe Nkomfa ibonisa ngokupheleleyo kubuchwepheshe aerospace phambili, liphonononga umbono lwesithuba nzulu kwaye ikhuthaza intsebenziswano nzulu endle isithuba, ngokusekelwe imilinganiselo ezintathu: inzululwazi isithuba, ubuchwepheshe kunye izicelo, kunye nemisebenzi ezine: imfundo, umsebenzi mveliso, disclosure zesayensi kunye nenkcubeko
Oovulindlela aerospace kunye amazwe wasondela eqongeni, ukuba bammise phambi impumelelo ezintsha kunye inkqubela yeeprojekthi ezinkulu spaceflight China, njengoko Lunar Exploration Programme of China, Navigation System Satellite Beidou, i msebenzi Inkqubo va swi China kunye Gaofen. kwaye uxoxe ngokunzulu ngakumbi kwimeko yophuhliso kunye neengxaki ezibalulekileyo emhlabeni wonke.
U-Wu Weiren, iNjineli eyiNtloko yeNkqubo yokuHlola iLunar yaseChina kunye ne-Academician ye-Academy yaseTshayina yobuNjineli, ihlolisise impumelelo yeNkqubo yokuHlola yaseChina kwaye ijonge kwixesha elizayo. "I-Chang'e-5 iya kusungulwa kwaye imbuyekezo epheleleyo yesampulu yenyanga iya kufezekiswa kungekudala."
I-Ran Chengqi, uMlawuli we-Ofisi yoLawulo lweNkqubo yeSatellite Satellite kunye neSekela loMlawuli we-Beidou Satellite System Navigation, wabonisa ukuphumelela kwangoku kunye nenqubekela phambili kwinkqubo yeBeidou. Kulo nyaka, iBeidou 3 iya kuqalisa phakathi kweetellethi ezisixhenxe ukuya kwezi-9. 2020 nge ukugqitywa iyonke zolwakhiwo network Beidou 3, uyakwazi ukunika navigation basic, iinkwenkwezi eziphuculiweyo ezisekelwe, unxibelelwano umyalezo omfutshane, wonke kunye nokuhlangula, ngqo ukubeka kunye nezinye iinkonzo ukuze ihlabathi.
Kwiiseshoni ze-10 ezifanayo:
Izihloko ezixoxwa ngazo zihlukeneyo kwaye ziza kwenzeka, ezifana nokuqaliswa kwengqiqo, iteknoloji yokucwangcisa iinjongo ze-spacecraft phantsi kweemeko ezintsha, ukuveliswa kwe-aerospace kunye nezinto eziphathekayo, ukulungiswa kwe-aerospace, etc.
Umboniso uhlukaniswe kwiindawo ezine: i-China kunye neenkampani kwishishini langaphandle lorhwebo, Impumelelo yesikhala, i-Scientific popularization kunye ne-Space photography. Ukongeza kwi-China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) kunye neChina yeAerospace Science and Industry Corporation (CASIC), Iinkampani aerospace New ezifana ZeroG Space, Min Space, esembindini Energy kunye SPACETY kwakunye neenkampani endle iinkcukacha geospatial, ezifana ESRI, GeoVIS kunye SatImage Information Technology wenza phambi kwabo, ngokubonelela umbono opheleleyo chain Imboni ye-aerospace yeChina, ukuhlanganiswa kwemboni ye-aerospace kunye neziphumo zezicelo zayo.
Siyahlonishwa ukuba i-European Space Agency kunye ne-CNES (i-Arhente ye-Spatial of the French Government) ibonisa ukuphumeza kwayo apha njengelizwe leendwendwe.
Xu Dazhe, i-Hunan irhuluneli, uZhang Kejian, umlawuli we-CNSA kunye namanye amagosa karhulumente ahlolisise umboniso.
Xu Dazhe, i-Hunan irhuluneli kunye noZhang Kejian, umlawuli we-CNSA uhlola umboniso wempumelelo ye-aerospace
Kwimisebenzi yolwazi lwezenzululwazi:
Iingcali ezisixhenxe kwintsimi yeendawo zivakatye izikolo eziyisixhenxe kwiintsuku ezintlanu, zathetha ngeempumelelo zendawo, zazisasaza ulwazi kunye nenkcubeko ebhekene nabantwana.
I Nkosikazi Simonetta Di Pippo, uMlawuli we-ofisi yeZizwe eziManyeneyo engaphandle Affairs Space, wamnika ngakumbi isifundo kwi popularization abafundi inzululwazi isithuba kwe 300 High School No. 1 kwisixeko Changsha nge umxholo we Ukuhlolisiswa kweZithuba kunye neSayensi kunye neThekhnoloji yeZizwe eziManyeneyo
PoNgaba ungasitshela malunga neengqungquthela zezinye iziganeko zeSuku lweSithuba?
I-Ceremony yokuvula (ngo-Aprili 24)
I-CNSA yakhupha isitatimende malunga nophuhliso lwe-aerospace I-China ye-UN Iinjongo zoPhuhliso oluzinzileyo 2030.
Umkhosi wokuvula uMhla woSuku lwe-2019 eChina
Iintlanganiso zeZizwe eziManyeneyo / iChina kwizixazululo zendawo - Ukufezekiswa kweenjongo zoPhuhliso oluzinzileyo (ukusuka kwi-24 ukuya kwi-27 ngo-Ephreli)
Xu Dazhe, iRhuluneli yaseHunan, iZhang Kejian, uMlawuli we-CNSA kunye noNks. Simonetta Di Pippo, uMlawuli we-United Nations Office Imicimbi yabangaphandle beza kumthendeleko wokuvula kwaye bahambisa intetho ekhuthazayo
I-CNSA isayine izivumelwano kwintsebenziswano yendawo ngokwahlukileyo kunye ne-Ofisi yeMicimbi yeZithuba zangaphandle zeZizwe eziManyeneyo, iTurkey, iTopiya kunye nePakistan.
Hunan Symposium ekuphuhliseni imboni ye-aerospace
Izivumelwano ezilishumi elinambini zentsebenziswano yeeprojekthi phakathi kweenkampani ze-23 / amaziko anomlinganiselo wokutsalwa kwe-RMB20 ezigidigidi zisayinwe ngempumelelo.
Ingqungquthela ye-2020 ye-China Space iya kubanjwa nini kwaye ibephi na kwaye kufuneka ndixubushe nobani ukuba ndingathanda ukuthatha inxaxheba?
Njengomcimbi wonyaka, iNkomfa iya kubanjelwa kwiiNkcazo Zosuku lwe-China Space (24 ngo-Apreli) kwi-2020. Indawo kufuneka iqinisekiswe. Ukubona uphuhliso olukhawulezayo lwezoshishino ze-aerospace kwilizwe lonke nakwamanye amazwe, ndiyakholwa ukuba iNgqungquthela ye-2020 ye-China Space izakufumana ezininzi ukunika abachaphazelekayo abachaphazelekayo.
I-Taibo iya kuba yinto eya kufumana xa ufuna ukubandakanyeka. I-Taibo iboniswe njengeMedia Partner yezoshishino (Cofa apha ukuze uthole iinkcukacha ezithe nkcukacha malunga nenkomfa) kunye ne-Investment Recruiting Partner ye-2019 ye-China Space Conference Exhibition yokubambisa yonke isiganeko kunye nokufumana amaqabane, abaxhasayo kunye nababonisi.
Ukufumana olunye ulwazi, tyelela http://www.taibo.cn/ okanye umnxeba may.xu@taibo.cn. Ungasifumana kwi-Twitter: TaiboUngenile